प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १८:५७
हाम्रो छालाको बनावट सामान्यतय तीन तह अथवा तीन पत्रले बनेको हुन्छ । छालाको बाहिरी भाग अर्थात माथिबाट क्रमशः इपिड्रमिस, ड्रमिस र सबक्यूटानियस टिस्यूले बनेको हुन्छ । त्यसमा पनि इपिड्रमिस भित्र माइक्रोसकपिक चारवटा पत्र रहेको हुन्छ । सामान्यतय हाम्रो शरीर ढाकेको पूरै छालाहरुमा यहि नै बनावट हुन्छ तर, हात र खुट्टाको पैतलामा भने इपिड्रमिस भित्रको एउटा पत्रको बनावट थप हुन्छ । समग्रमा हाम्रो शरीरलाई बाहिरी रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नकालागि प्राकृतिक तवरले छालाको बनावटले मद्धत गर्दछ । आज हामी कोरोना संक्रमणमा छालाको भुमिकाका बारेमा वरिष्ठ छाला, कुष्टरोग तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. सुमित पाण्डेसँग डा. देवेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्न गईरहेका छौं ।
छालाबाट संक्रमण कसरी र कुन पत्रबाट सर्ने गर्दछ ?
– छालाको मध्य भागको पत्र अर्थात ड्रमिसमा हाम्रो शरीरको मसिनो रक्तसंचार जोडिएको हुन्छ । यदि कारणवंश हाम्रो छालाको इपिड्रमिसमा क्षति भएर ड्रमिसमा कुनै पनि किटाणु अर्थात कन्टामिनेसन भयो भने हाम्रो शरीरमा छालाको मार्फतबाट सजिलै संक्रमण सर्ने गर्दछ ।
छालाबाट कोरोना संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन ?
– अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमले पिरोलिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने कोरोना भाइरस हाम्रो छालाको सामान्य बनावटबाट हाम्रो शरीरमा छिर्न सक्दैन । यसको लागि हाम्रो शरीरको म्यूकोजल मेमरेन (पत्र) अर्थात आँखा, नाक र मुख (ओरल क्याबिटी) जहाँ हाम्रो शरीरको अन्य छालाको बनावटमा भएको माइक्रोस्कपिक तह स्ट्याटिफाइड केराटिनाइज भन्ने तन्तु हुँदैन त्यस्तो म्यूकोजल मेमरेन अर्थात पत्रबाट मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने गर्दछ । त्यसैले यो समाजमा एक प्रकारको भम्र हो, छालाबाट कोरोना कदापि सर्दैन ।
के साबुन पानीे वा सेनिटाइजरले हात सफा नगरे कोरोना सर्ने जोखिम रहन्छ ?
– हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने माथि मैले भने जस्तै यदि हाम्रो शरीरको म्यूकोजल मेमरेन ९आँखा, नाक र मुख) मा संक्रमणका पुग्यो भने कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने गर्दछ । जस्तो कि हामीले दैनिक काम गर्दा, कसैसँग हात मिलाउँदा अथवा कुनै सामानहरु छुँदा यदि संक्रमण हाम्रो हातमा छ तर, हामीले हाम्रो हातलाई जानीनजानी आँखामा चलायौ, नाक चलायौ वा त्यहि हातले कुनै चीजलाई छोएर खायौ भने कोरोनाबाट हामी सजिलै संक्रमित हुन सक्ने संभावना रहन्छ ।
के साबुन पानीले कोरोना भाइरसलाई मार्दछ ?
– अवश्य पनि यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो । साबुन पानीले हात धुदैमा भाइरस मर्ने होइन । भाइरसको कोषिका बाहिर लाइपो प्रोटिन, फ्याटी एसिड लिपिड भन्ने तत्व हुन्छ । सामान्यतया हामीले प्रयोग गर्ने साबुनमा पनि लाइपो प्रोटिन, फ्याटी एसिड लिपिड भन्ने तत्व हुन्छ । त्यसैले हामीले कम्तीमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने अनुसार कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिचीमिची हात धोएमा भाइरसको लाइपो प्रोटिन, फ्याट्टी एसिड लिपिड र साबुनको लाइपो प्रोटिन, फ्याट्टी एसिड लिपिड भन्ने तत्व एक आपसमा गासिँएर साबुनको केमिकल भाइरसको कोषिका भित्रसम्म पुगेर भाइरसको सक्रिय हुने तत्वलाई निस्क्रिय पारिदिन्छ । यसरी हामी भाइरसबाट हाम्रो हातलाई मुक्त गराउन सक्दछौ । त्यसै गरि कुनै साबुनहरु डिटोल लगायतमा यान्टी व्याक्टेरिएल केमिकल हुन्छ । जसले हातमा रहेको ब्याक्टेरियालाई भने सजिलै मार्ने काम गर्दछ ।
बजारमा आएका ह्याण्ड सेनिटाइजरहरु सबै गुणस्तरिय तथा कारोना भाइरसलाई मार्न योग्य छन् त ?
– कोरोना भाइरसको महामारीसँगै बजारमा आएका सबै ह्याण्ड सेनिटाइजरहरु गुणस्तरिय हुँदैनन् । म एउटा छाला रोग विशेषज्ञ भएको नाताले के सुझाव दिन्छु भने ह्याण्ड सेनिटाइजर जसमा ७० प्रतिशत अलकोहलसँगै मोइचराइजरहरु जस्तै नरिवलको तेल, ग्लिसरिन, ऐलोबेरा लगायतका विशेषता भएका सेनिटाइजरहरु प्रयोग गर्नु अति नै राम्रो हुन्छ । अलकोहल मात्रै भएको सेनिटाइजरको बारम्बार प्रयोग गरेमा हाम्रो छालामा फुुर्सोपन देखिने हुन्छ । जसले गर्दा छालाको पिएच अर्थात प्रोपटीको सन्तुलन बिग्रने गर्दछ । त्यसैले अलकोहल सँगसँगै हाम्रो छालाको सौन्दर्यलाई पनि सुरक्षित राख्न नरिवलको तेल, ग्लिसरिन, ऐलोबेरा लगायतका विशेषता भएका सेनिटाइजरहरु प्रयोग गर्नु अति नै राम्रो हुन्छ ।
कपडाबाट कोरोना भाइरस सर्दछ कि सदैन ?
– अवश्य पनि, यो एकआपसमा जोडिएर आउने गर्दछ । हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं अझ विशेष गरि हामी स्वास्थकर्मीहरुले डिउटीबाट घर जाँदा हामीले लगाएको कपडाहरु चेन्ज गर्ने भनेर । यसको मतलब यो हो यदि हामीले लगाएको कपडामा कारोना संक्रमण छ, हामी कोही संक्रमित बिरामीसँग सामाजिक दूरी कायम नगरि बस्यो भने उसको श्वासप्रश्वाससँगै रेस्पिरेटरी ड्रपबाट हाम्रो कपडामा संक्रमण स¥यो भने त्यसबाट हाम्रो शरीरको छाला पनि सजिलै संक्रमित हुन सक्छ । अघि नै भने जस्तै यदि छालाबाट संक्रमण हाम्रो शरीरको म्यूकोजल मेमरेन (पत्र) अर्थात हाम्रो शरीरको आँखा, नाक र मुख (ओरल क्याबिटी) मा पुग्यो भने हामी सजिलै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्छौ ।
के कोरोना भाइरस यौनाङ्गहरुबाट सर्दछ ?
– हालसम्म विश्वमा जसरी कोरोना संक्रमण भएको छ यसमा कुनै पनि व्याक्तिमा अहिलेसम्म यौनाङ्गहरुबाट कोरोना सरेको तथ्य आएको छैन । तर, पुरुषको लिङ्ग र महिलाको यौनाङ्ग म्यूकोजल मेमरेन (पत्र) अन्तर्गत पर्ने भएकाले शरिरिक सम्पर्कका क्रममा यौनाङ्गको माध्यमद्धारा यो रोग सर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
छालाबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिने के-के गर्नुपर्ला ?
– आफ्नो हात नियमित रुपमा साबुन पानी तथा अल्कोहल मिसिएको सेनिटाइजरले धुने ।
– आफू र लक्षणहरु देखिएको व्यक्तिको बीचमा कम्तिमा पनि २ मिटरको दूरि बनाउने ।
– आफ्नो हातले जथाभावी मुख, नाक र आँखालाई नचलाउने ।
– घरबाट बाहिर निस्कदा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्ने ।
– खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा अनिवार्य रुपमा मुखलाई रुमाल अथवा हातले छोप्ने ।
– अनावश्यक रुपमा घरभन्दा बाहिर ननिस्कने ।
– आफू अथवा घरपरिवार कसैलाई यो रोगको लक्षणहरु देखिएमा घरमै सेल्फ कोरेन्टाइनमा बस्ने ।
– आफू र आफ्नो समुदायका मानिसहरुलाई कोरोना भाइरसबारेमा सचेत गराउने ।
– समूह या भीडभाडमा नजाने ।
– जनावरहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने ।
– आफूले बारम्बार छोइरहने र प्रयोग गर्ने सामानहरुलाई नियमित रुपमा सेनिटाइज गर्ने ।
– खाना वा माछामासु खाँदा एकदमै पखालेर वा उमालेर मात्रै खाने ।
– रोगबारे सावधानी अपनाउने, आफू र समुदायलाई पनि यो कुराहरु थाहा दिएर शेयर गर्ने ।